PTO SHAFT Soo-saare, Soo-saare, Warshad - yareeyayaasha, dixiriga dixiriga, sanduuqyada gooryaanka, gearbox-yada meeraha, xawaare yareeyayaasha, kala-duwanayaasha, maareynta jaangooyooyinka, baalashka bevel sprial, gearboxes-ka beeraha, cagafyada gears, gawaarida xamuulka qaada, dixiriga dixiriga
Ma waxaad raadineysaa ilo lagu kalsoon yahay oo ka mid ah qaybaha nidaamka wadista PTO? HZPT, waxaan ku siineynaa wax walboo aad ubaahantahay si aad ugu badiso waxqabadka cagafyada iyo qalabka beeraha. Waxaan leenahay xarun 60,000 oo cag laba jibbaaran qeybisa oo keydisa qaybo kala duwan oo PTO ah oo ka yimaada soo saarayaasha sare ee warshadaha. Tiro koobkeena ballaadhan ayaa noo suurtagelinaya inaan ku siino alaabtaan qiimayaasha tartanka.
Markaad daalacaneysid xulashadayada qaybaha PTO, waxaad ka heli doontaa wax kasta oo ka yimaada harqood iyo fallaadho ilaa nidaamyada gudbinta iyo ulaha duudduuban. Haddii aadan hubin sheyga ugu fiican qalabkaaga, fadlan nala soo socodsii. Kooxdayada aqoonta leh waxay kuu tilmaami karaan jihada saxda ah.
Warshadaha Drive usheeda dhexe
MUUQAALKA PTO SHAFTS